Misy antso video izao ao amin'ny WhatsApp beta | Androidsis
Manuel Ramirez | | Fampiharana Android, About us, WhatsApp
Una amin'ireo fiasa andrasana indrindra antso video dia efa tao amin'ny WhatsApp efa elaela izao. Fantatra fa ny ekipa WhatsApp dia niasa tamina fotoana fohy io fampiasa io ary nanatevin-daharana antso an-tariby ho iray amin'ireo endri-javatra izay tsy ho ela na ho haingana dia hahatratra ny fampiharana fandefasan-kafatra be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao amin'ny planeta iray manontolo.
Androany dia miseho ho an'ny mpampiasa sasany izy io ny safidy hiantso video. Fiovana lehibe ho an'ity fampiharana fandefasan-kafatra ity izay hifaninana mivantana amin'ireo mpanjakavavin'ity sokajy ity toa ny Skype na Hangouts. Ny zavatra mahatsikaiky momba ity fametrahana ity, izay noheverina ho isam-paritra, dia ny ahafahan'izy ireo mampihetsika amin'ny fomba izay hizaranay aminao eto ambany.
Raha ao anatin'ny iray amin'ireo ianao Kinova beta WhatsAppAvy amin'io programa io ao amin'ny Google Play Store, tsy mila manavao na inona na inona ianao, satria ho toy ny tsy misy izany. Mazava ho azy, raha manao antso an-tsary ianao ary tsy manana izany ny mpandray azy, manana kinova taloha amin'ny fampiharana, ny hany zavatra azonao atao dia ny miantso feo.
Ho ahy manokana, aorian'ny fanavaozana ny WhatsApp avy amin'ny Google Play Store (ao amin'ny fantsom beta aho) dia afaka mivoaka aho fanindriana ny kisary antso eo am-baravarankely resaka. Misy menio mipoitra izay ahitanao ny safidin'ny antso an-peo na antso an-tsary.
Tsindrio ny antso an-tsary ary midira mivantana amin'ity fampiasa ity izay hanokatra tontolon'ny safidy vaovao hifandraisana amin'ireo namana na fianakaviana. Raha ao amin'ny kinova beta farany an'ny WhatsApp ianao dia misy mpampiasa sasany nahavita izany manery fampahavitrihana rehefa manao famafana angona ary manomboka WhatsApp indray. Mazava ho azy, tsarovy fa tsy maintsy manao kopia amin'ny sakaizanao ianao mba tsy hahavery azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Hita amin'ny WhatsApp izao ny antso an-tsary, na dia ho an'ny mpampiasa sasany ihany
Avereno jerena ny TV BOX TX3 Pro na ny fomba fanovana ny TV-nao ho TV Android amin'ny vidiny 30 Euros fotsiny